''အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဝါသနာလည်း ပါတာကြောင့် တစ်ခုချင်းစီကို သေချာလုပ်သွားမှာပါ'' ဇွန်သံစဉ် - Yangon Media Group
အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကုန်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇွန်သံစဉ် နှင့်တွေ့ဆုံခိုက် ယခုလို မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- လတ်တလောမှာ မိသားစု နဲ့ ခရီးတွေထွက်ဖြစ်နေတယ်ဆို တော့ ဘယ်တွေကိုသွားဖြစ်လဲ။
ဖြေ- မိသားစုနဲ့ ခရီးထွက်ဖြစ် တယ်ဆိုတာကလည်း နှစ်စဉ်တော့ ထွက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့မိသားစု မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို သွား ဖြစ်တယ်။ ခရီးထွက်ရတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ အနားယူအပန်းဖြေတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောကတော့ ကမ်းခြေ တွေ သွားဖြစ်တယ်။ မနေ့ကမှ ပြန်ရောက်တယ်။ လာမယ့် တနင်္ဂ နွေနေ့လောက်တော့ မော်လမြိုင် အနှံ့သွားဖို့လည်းရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဂ ယာ သွားဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ဒီ ရက်ပိုင်းတွေ သွားဖြစ်တာကလည်း သင်္ကြန်နားလည်း နီးပြီးဆိုတော့ အိမ်ကကလေးတွေကလည်း ကျောင်းပိတ်ထားတာလည်း ပါပါတယ်။
မေး- Miss တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ သရုပ်ဆောင်လည်းလုပ်တယ်။ အဆိုပိုင်းလည်း လုပ်ချင် တယ်ဆိုတော့ ဘယ်တော့လောက် လုပ်ဖြစ်မှာလဲ။
ဖြေ- အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် တော့ အကုန်လုပ်ချင်တယ်။ ဝါ သနာလည်း ပါပါတယ်။ အဆိုပိုင်း လည်း ဝါသနာပါတယ်။ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဝါသနာလည်းပါ တာကြောင့် တစ်ခုချင်းစီကို သေချာ လုပ်သွားမှာပါ။ အရင်တုန်းက Miss တစ် ယောက်အဖြစ်နဲ့တုန်းက ရုပ် ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ကမ်းလှမ်း တယ်။ အဲဒါကြောင့် သေချာလည်း လုပ်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပိုင်းကိုတော့ ပွဲလေးတွေပဲဆိုဖူးပါတယ်။ အခွေ တွေ၊ ဘာတွေထုတ်ဖို့ကတော့ လို ပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ကိုယ်ကလိုအပ်နေသေးတာ လည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲလေး တွေမှာ ဆိုပေးဖို့ပြောရင်တော့ ဆို ဖြစ်ပါတယ်။ အခွေထုတ်ဖို့တော့ လိုပါသေးတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ သေ ချာလုပ်သွားမယ်။
မေး- အခုနောက်ပိုင်း အပြင်ပွဲ တွေမှာ အစီစဉ်တင်ဆက်သူတစ် ယောက်အနေနဲ့ လုပ်တာလေးတွေ လည်းရှိတော့ အစီအစဉ်တင်ဆက် သူတစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ဖို့ အစီ အစဉ်ရှိမလား။
ဖြေ- MC လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကလည်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝါ သနာပါတယ်။ နောက် ပွဲရှင်တွေ ကလည်း ကိုယ်နဲ့သိနေတဲ့သူတွေ ဆိုတော့ လုပ်ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ MC တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်သွားဖို့ကတော့ ကိုယ့်မှာ လည်း ပညာမပြည့်သေးတာလည်း ပါတယ်။ နောက် လေ့လာထားတာ တွေလည်း ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Youtube ကနေလည်း လေ့လာတယ်။ နောက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက အစီစဉ်တင် ဆက်သူတွေကိုလည်း ကြည့်ပြီး တော့ လေ့လာဖြစ်တာတွေတော့ လုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ပွဲတွေများလာရင်တော့ သေချာ လုပ်ဖြစ်မှာပါ။
မေး- ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထား တဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့လေးမှာ လုပ်ဖြစ် တာလေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေး ပါဦး။
ဖြေ- ကိုယ်တိုင်ထောင်ထားတဲ့ ပရဟိတအဖွဲလေးကိုတော့ ”မွန် မြတ်သစ္စာ” ဆိုပြီး တည်ထောင် ထားပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့လေးကတော့ သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်တဲ့သူတွေ ကို အဓိကထားလှူတဲ့ အဖွဲ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း နယ်တွေကို သွားရောက်လှူဒါန်း တယ်။ နောက် ညီမက အခြားပရ ဟိတအဖွဲ့တွေမှာလည်း အားရင် အားသလို ပါဝင်ကူညီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကတော့ လတ်တလော နားထားပါတယ်။ ဒီအချိန်ကလည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ် တာနည်းတယ်။ မိုးကျတဲ့ကာလ တွေဆိုရင်တော့ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်တွေ ကျရောက်တက်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဖြစ်လာတဲ့နေရာ ဒေသတွေအပေါ်မူတည်ပြီး အဖွဲ့ သားတွေနဲ့ တိုင်ပင်လုပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ အဖွဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေကို တော့ ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေလုပ် ပြီးရှာတယ်။ နောက် လှူဒါန်းချင် တဲ့သူတွေက ဆက်သွယ်လာရင် လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် သွား ရောက်အလှူငွေကောက်ခံဖြစ်ပါ တယ်။ ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကို လှူ ဖို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲဖြစ်တာက တော့ ညီမရယ်၊ အမေရယ် နောက် အဖွဲ့ထဲက ခေါင်းဆောင်တစ် ယောက်ရယ်က လုပ်ပါတယ်။
Linkin Park အဖွဲ့၏ အနာဂတ် မရေရာဟု မိုက်ပြော
ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်တုအတွက် လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ ကျ??
ကလေးပြုစုရေး သင်တန်းကျောင်းများသို့ စွန့်ပစ်ခံ ကလေးသူငယ် လက်ခံရရှိမှု တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် မ??